मन्त्री भइसकेको व्यक्ति राजदूत बन्न शैक्षिक योग्यता आवश्यक नपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश - समाचार - कान्तिपुर समाचार
'एमालेमा तीन गुट छन्- केपी ओली, हामी र वामदेव गौतमको गुट'
संसद् विघटनको सिफारिस फिर्ता भए देउवालाई समर्थन गरिएको हस्ताक्षर पनि फिर्ता हुन्छ ।
असार ४, २०७८ बबिता शर्मा
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच भेटघाटमात्रै होइन बोलचालसमेत ठप्प छ । एकताका लागि एकले सारेको प्रस्ताव र सर्त अर्काले अस्वीकार गर्ने श्रृंखला जारी छ ।
ओली नेपालसहितका नेतालाई कारबाही गरेर उनीहरुबिनाको पार्टीको परिकल्पनासहित अगाडि बढेका छन् भने ओलीविरोधी विपक्षी मोर्चामा सहभागी भएर नेपालले आफ्नो बाटो पनि सोझ्याउँदैछन् । यस्तोमा एमालेका शीर्ष नेताहरुबीचको एकता नदीको दुई किनाराको मिलनजस्तो कठिन बन्दै गएको मान्न थालिएको छ । तर, पनि एमालेका दोस्रो तहका दुवैपक्षका नेता पार्टी एकताको कोसिसमा जुटिहेका छन् । औपचारिक कार्यदलले काम नगरेको अवस्थामा उनीहरुका भूमिकामाथि प्रश्न पनि छन् । यस्तोमा वार्तामा सहभागीमध्ये एक भीम आचार्यसँग पार्टी एकताका लागि भइरहेका कोसिस र सम्भावित नतिजाबारे बबिता शर्माले गरेको कुराकानीः
एमाले विभाजनको नजिक छ भन्ने बुझाई छ, तपाईंले नजिकबाट हेर्नुभा'छ, यो अनुमान कति सत्य हो ?
फागुन २३ गते नेकपा फुटाएर एमाले र माओवादी केन्द्र बनाउने अदालतको निर्णयपछि फागुन २८ गते पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले एकपक्षीय बैठक बोलाएर धमाधम निर्णय गर्न थालेपछि झन्डै–झन्डै पार्टी विभाजनको डिलमा आइपुगेको छ । दुर्घटनाउन्मूख छ । तर, हामी संयमका साथ समस्या हल गर्नुपर्छ भन्नेमा छौं । महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीलगायत जिल्ला प्रदेश र जनसंगठनहरु कायम हुनुपर्छ भन्ने अडान राख्दै र संघर्ष गर्दै आयौं । यहाँसम्म आइपुग्दा अरु राजनीतिक घटना, प्रतिघटना पनि भए । संसद फेरि विघटन भयो । अरु विषयले पनि राजनीतिक द्वन्द्व बढाएकै छन् ।
अहिले अनौपचारिक रुपमा भएपछि संवाद जारी छन् । मोटोमोटी हामी सहमतिनिकट पुगेका छौं । यदि कुनै चालबाजी या छक्कापञ्जा गरेर अलमल्याउने नियत छैन भने छिट्टै सहमतिमा पुग्छौं ।
त्यसो भए पार्टी एकता हुन्छ भन्नेमा ढुक्क हुनुहुन्छ ?
पार्टी एकता हुने सम्भावना छ, त्यसको विकल्प छैन । पार्टी विभाजन हुनु भनेको पश्चिम बंगालको कम्युनिष्टको बाटो हिँड्नु हो । जुन बाटो हिँड्दा त्यहाँ अहिले १ सिट पनि कम्युनिष्टले ल्याएनन् । त्यसकारण मूर्खतापूर्ण ढंगले त्यो बाटो हिँड्ने काम गर्नु हुँदैन, पार्टी एकता हुन्छ । भन्न त ९९ प्रतिशत भनेको छु तर सयप्रतिशत नै विश्वस्त छु । यदि ओलीले पार्टी विभाजन गरे घोर भर्त्सना गरेर विपक्षमा उभिन्छु । यदि अर्को कसैले विभाजन गर्छ भने पनि म त्यसको विपक्षमै हुन्छु ।
तपाईंहरुको कोसिसको नतिजा कहिलेसम्म देख्न सकिएला ?
छक्कापञ्जा, दाउपेच भएन भने आठ–दस दिनमा परिणाम निस्कनु पर्छ ।
तपाईं एकता हुनेमा ढुक्क हुनुहुन्छ र वार्तामा पनि हुनुहुन्छ । तर, शीर्ष नेताको बोलचाल छैन । यस्तोमा तपाईंहरुका कोसिस बालुवामा पानी खन्याएजस्तो हुन्छ कि ?
झगडा परेको बेला ठूला नेताको पनि होस आउँदैन । अहिले हामी आगामी दिन र भविष्य हेरेर एकताबद्ध भएर जाने काम गर्छौं । त्यही दृष्टिकोणका साथ संवाद भइरहेको छ ।
तपाईंहरुका गतिविधिमाथि पनि आंशकाहरू छन्, तैपनि विश्वास दिलाउन सकिन्छ भन्ने तपाईंलाई लागेको छ ?
आशंका छन् भन्ने लाग्दैन । यस्तो गम्भीर अवस्थामा खेल्ने तत्व पनि हुन्छन् । खासगरी प्रतिक्रियावादी तत्वले पार्टी विभाजन गर्न अनेकखालका खेल गरिरहेका हुन्छन् । ती खेलमा पर्ने हो भने कसैले कसैलाई जोगाउन सक्दैन, सिद्धिने बाटोतिर लागिन्छ । तर, त्यस्तोबाट पार्टी नेतृत्व जोगिएर जानुपर्छ । एमालेका ९५ प्रतिशत कार्यकर्ता, शुभचिन्तक, मतदाता एकताको पक्षमा छन् । केही निश्चित मान्छे, दुवैतर्फ विभाजनको पक्षमा हुन्छन् । पार्टी विभाजन गर्नको लागि दुवैतिर उचाल्ने, आगो झोस्ने काम ती मान्छेले गरिरहेका हुन्छन् । जोगिएर अगाडि जान सकिएन भने पार्टी र आन्दोलनलाई जोगाउन सक्दैनौं । मलाई विश्वास छ, एउटा समझदारीमा पुगेपछि शीर्ष नेताहरुसँग बसेर पनि छलफल गर्छौं । नेताहरुबीच छलफल गराउँछौं र एउटा निष्कर्षमा पुगेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँछौं । अर्कोतर्फ माधव नेपाल, झलनाथ खनालको जानकारीबिना संवाद हुने कुरा भएन । हामीले सबै उहाँलाई ब्रिफिङ् गर्ने गरेका छौं ।
अध्यक्ष केपी ओलीले अगाडि सारेको एकताका लागि ६ बुँदे आव्हानलाई त सम्पूर्णरुपमा खारेज गरेर माधव नेपालले देशभर संगठन बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ । यस्तोमा नाटकीय रुपमा घटनाक्रम विकास होला भनेर विश्वास गर्न त कठिन छ नि ?
त्यो माधव नेपाल एक्लैले हैन, हामीले सामूहिक छलफल गरेर निकालेको निष्कर्ष हो । किनभने त्यसमा एकता गर्ने कुरा सर्तसहित आएको थियो । एमालेमा महाधिवेशनबाट चुनिएर आएका कमिटी छन् । महाधिवेशनबाट चुनिएर आएका कमिटी स्थापित हुन कसैका सर्त मान्नु पर्ने भन्ने नचाहिँने कुरा हो । अन्य कतिपय अधुरा, अपुरा र सर्तसहितका थिए ती हामी सबैले नमानेको हो ।
जहाँसम्म देशभर संगठनको कुरा छ, सुरुमा त्यसको विचार मैले नै ल्याएको हुँ । हामीले छलफल गरेर निष्कर्ष निकालेका हौं । त्यसको नेतृत्व माधव नेपालले गर्नुभएको हो । उहाँले एक्लै गर्नुभएको हैन, सामूहिक निष्कर्ष निकालेका हौं । हामी एकताको निष्कर्ष पनि सामूहिक रुपले नै निकाल्छौं ।
त्यसो भए पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउँदा अहिलेको समस्या हल हुन्छ ?
हो । अध्यक्षले विनासर्त नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर अगाडि बढ्दा समस्या हल हुन्छ । तल-तल पनि त्यो हुनुपर्छ । पार्टीका प्रदेश, जिल्ला, नगर कमिटी, वडा कमिटी र जनसंगठन पनि जो अधिवेशनको प्रक्रियाबाट आएका छन्, ती सबै कमिटी स्थापित हुने बित्तिकै समस्या हल हुन्छ ।
यहीबीचमा कुनै प्रदेशमा सांसदहरुमाथि कारबाही चलेका छन् । तर, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई लिएर केही प्रदेशमा एमालेबीचको एकता पनि देखियो । यो एकता इमान्दार प्रयत्न हो कि रणनीति ?
पहिला धेरै झगडा हुँदा ‘फ्लोर क्रस’, कारबाही, अनुपस्थित, हृवीप उल्लङ्घन हुने नै भए । यी स्वभाविक हुन् । त्यो हुनमा पनि पार्टीको प्रमुख नेतृत्वको कमजोरी छ । किनभने न बैठक छ, न छलफल नै । यो नभई मान्छेलाई कारबाही गर्ने, स्पष्टीकरण सोध्ने र तर्साउन खोज्दा त्यसको ‘रियाक्सन’ हुने भयो । तर, जब पार्टी मिल्नुपर्छ भनेर त्यो दिशामा गइसकेपछि एकताको मार्गमा कुनै अवरोध नहोस् भनेर हामीले ‘गुडवुल जेस्चर’को रुपमा केही प्रदेशमा गतिविधि अगाडि लगेका छौं । त्यसले पार्टी एकतालाई बल पुर्‍याउँछ ।
माधव नेपालले त आफूलाई विपक्षी गठबन्धनमा सामेल गराईसक्नु भएको छ । यो त असाधरण परिघटना होइन र ?
त्यो त हिजो झगडा परेको बेला बनेका हुन् । खासगरी संसद विघटन भइसकेपछि संसद पुनःस्थापना गर्नको निम्ति गरिएको प्रयत्नको रुपमा त्यसलाई लिनुपर्छ । अन्य हिसाबले त्यसलाई लिन हुँदैन । हामीले पार्टी एकता गरिसकेपछि त्यो प्रयत्न अदालतलाई छोडिदिने हो । त्यसपछि यी कुरा समाप्त हुन्छन् ।
माधव नेपालले आफ्नै निवासमा शीर्ष नेताहरु बोलाएर गठबन्धनलाई मजबुत बनाउने सहमति गर्नुभएको छ । योचाहिँ के हो ?
हैन, हामीले त्यस्तो रुपमा लिनु हुँदैन । खुला परिवेशमा नेताहरुबीच छलफल–बहस हुन्छ । देशका साझा समस्याबारे छलफल हुन्छ । त्यो कुनै अनौठो हैन, कसैका विरुद्ध मोर्चाबन्दी पनि हैन । मूलभूतरुपमा त्यसलाई संसद पुनःस्थापनाको पहलको रुपमा लिनुपर्छ । तर, संसदको सबै कोर्स अदालतमा गइसकेपछि सबै आफ्नो ठाउँमा आइपुग्छन् ।
संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा छ, त्यसको निर्णयले एमाले एकता प्रभावित गर्छ कि गर्दैन ?
यदि एमाले एकताबद्ध भएर अगाडि गयो भने अदालतको निर्णयलाई हामी मान्छौं ।
संसद् विघटनदेखि अध्यादेशको श्रृंखलासम्म र मन्त्रिपरिषद विस्तारदेखि नियुक्तिसम्ममा ओली र नेपालबीच दृष्टिकोणमा धेरै अन्तर छ । राष्ट्रिय राजनीति प्रभावित पार्ने यति महत्वपूर्ण विषयमा मतभेद कायमै राखेर तपाईंहरुले अहिले भनिरहेको एकता कस्तो होला ?
सिद्धान्त, विचार, दर्शनमा फरक–फरक भयो भने धेरै गाह्रो हुन्छ । दर्शन, सिद्धान्त, विचारमा हामी एकमत छौं । कार्यदिशामा पनि एकमत छौं । दैनिक रुपमा सरकारले गर्ने केही काम, केही राजनीतिक विषयमा हाम्रा फरक दृष्टिकोण छन् । त्यसकारणले नै पार्टीमा विवाद भएको छ । त्यसैले ती खास केही राजनीतिक घटनाक्रम र राजनीतिक विवादले पार्टी विभाजनको तहमा पुग्नु हुँदैन । यी विवाद पार्टी विभाजनको तहमा पुग्ने खालका हैनन् । त्यसमा छलफल गरेर सल्टाउन सकिने विषय हुन् । त्यसकारण पार्टी एकताका सबै कुरा टुंगिइसकेपछि ती विषयलाई क्रमश: समयक्रममा छलफल गरेर हल गर्दै जान्छौं ।
त्यसो हुँदा नैतिक संकट त पर्ने देखियो नि ! बाहिर के जवाफ दिनुहुन्छ ?
हामीले अहिले प्रधानमन्त्रीका कदमलाई समर्थन गर्छौं भन्ने छैन । त्यसमा प्रधानमन्त्रीले यो ठाउँ गलत गरे भन्ने स्थिति आउँछ । गलतलाई सही भयो भन्ने हुँदैन । संसद विघटन पनि गलत नै हो, त्यसलाई ठीक भन्ने भएन । प्रधानमन्त्रीले पनि एक ठाउँमा गएर यो गलत नै थियो, खास परिवेशमा गल्ती हुन गयो भन्नु हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । तर, अहिले एकता हुने र त्यो भन्ने समयको ‘ग्याप’ हुन्छ । त्यतिखेर हामी कुनै शब्द जन्माएर मिलाएर जान सक्छौं । तर त्यसको विपक्षमा हामी उभिन्छौं भन्ने हुन्न । त्यसकारण त्यहाँ नैतीक संकट पर्ने प्रश्न हुँदैन ।
अहिले तपाईंहरुले भनिरहेको एकतामा चुनावको चिन्तामात्रै देखिन्छ । त्यहाँ व्यक्तिगत चासोले बढी काम गरेको देखियो भनेर तपाईंकै समूह र बाहिरबाट पनि आलोचना भएको छ नि ?
चुनावको डर मान्नु पर्‍यो नि ! त्यो स्वभाविक हो । चुनावको डर भनेको जनतासँग डराउने हो । हामीले जे–जति गतिविधि गर्‍यौं कतिपय ठीकै गरे हौंला, कतिपय अलि बढी गरेका हौंला । ती कुराहरुले जनतामा जाँदा डराउनु स्वभाविक कुरा हो, यो वास्तविकता हो । हामी जनतासँग डराउँछौं । अरु बेला पनि डराउँछौ । अझ प्रत्यक्ष भेट निर्वाचनमा हुन्छ । त्यसकारण जनताले हामीलाई के भन्छ भन्ने ख्याल गरेर पार्टीका विवाद, नीति, कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्छ भन्नेमा सजग छौं । त्यसकारण चुनावदेखि हामी डराउँछौं, जनतादेखि डराउँछौं । जहाँसम्म पार्टीगतभन्दा व्यक्तिगत चासोको कुरा छ, जो मान्छे व्यक्तिगत हितमा लागिरहेको छ, त्यसैले लगाउने आरोप हो । पार्टी फुटाउने चाहना पूरा हुँदैन कि भन्नेले यस्तो भन्छन् । हामी यस्ता कुराबाट विचलित हुँदैनौं । आशंकाको अर्थ छैन । हामी पार्टी मिलाउने मान्छे हौं । समस्याबाट भाग्दैनौं । ओलीले उत्पन्न गरेका समस्या हल गरेर अगाडि बढ्छौं भन्ने आँट छ ।
अघि तपाईंले भन्नु भयो पनि आठ-दस दिनमा नतिजा देखिन्छ भनेर । पछिल्लो संवादमा के–के विषयमा सहमति भयो र मिल्न बाँकी के–के छन् ?
ओलीले अगाडि सार्नुभएको ६ बुँदे प्रस्तावको पहिलो बुँदामा झण्डै झण्डै कमिटी पुनःस्थापित गर्नेजस्तो गर्नुभयो । अलि अलि ‘इफ’, ‘बट’ केही छन् । त्यसलाई हटाउन तयार हुनुहुन्छ । तर, त्यसमा मुद्धा फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने सर्त राख्नु भयो । महाधिवेशनबाट चुनिएर आएको केन्द्रीय कमिटी छ, म त्यसको सचिव छु । म महाधिवेशनबाट चुनिएर आएको हुँ । कसैका इच्छाले म त्यहाँ आएको हैन । महाधिवशेनबाट चुनिएर आएको हुँदा अरु कसैका सर्त पूरा गर्ने भन्ने हुँदैन । यसैमा कहीं न कहीं मिलेको छैन । यसलाई मिलाउने कोसिस भइरहेको छ । एकताको बाधक नै अनावश्यक ढंगले अगाडि सारिएको सर्त हो । त्यसमा अहिले धेरै विवाद गर्नेभन्दा पनि कुनै साझा राजनीतिक निष्कर्ष निकालेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न भइरहेको छ । त्यसैमा शब्दावली मिलाउने कोसिस हुँदैछ ।
शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेका २३ सांसदले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने सर्त ओलीपक्षबाट आयो भन्नु भयो । त्यसलाई कसरी मिलाउनु हुन्छ ?
त्यसको प्रतिसर्त आउँछ, संसद् विघटनको सिफारिस फिर्ता हुनुपर्‍यो । त्यसपछि शेरबहादुर देउवाको पक्षमा गरेको हस्ताक्षर पनि फिर्ता हुन्छ । तर, विघटन यथावत राखेर मुद्धा फिर्ता लिने कुरा भएन ।
शब्दावली मिलाउने काम हुँदैछ भन्नु भयो, यसमा कुन शब्द राखेर मिलाउनु हुन्छ ?
यदि त्यो फिर्ता लिने हो भने विघटन गलत थियो, त्यसमा हामीले गलत गर्‍यौं भनेर सरकारी वलिकले भने पनि हुन्छ । त्यसले हस्ताक्षर फिर्ता लिन सहज हुन्छ । उहाँहरुबाट त्यो हुँदैन भने अरु पनि फिर्ता हुँदैन । त्यसो हुँदा त्यो बिषयमा चुप लाग्ने । अदालतले जे निष्कर्ष निकाल्छ त्यसैलाई मानेर सबै अगाडि बढ्ने । यो अर्को बाटो हुनसक्छ ।
त्यसो भए केपी ओली र माधव नेपालबीच कहिले संवाद गराउनु हुन्छ ?
अनौपचारिक ढंगले मोटमोटी कुरा मिल्लाजस्तो भयो भने संवाद हुन्छ । शीर्ष नेता भेटेर मिलेन रे भन्नुले राम्रो सन्देश जाँदैन । अनौपचारिक पृष्ठभूमिमा सहमति निकट आएपछि शीर्ष नेताबीच छलफल हुन्छ ।
यदि तपाईंहरुको अनौपचारिक संवादको प्रयत्न सफल भएन भने के हुन्छ ?
हुँदैन भन्ने कल्पना गर्दिनँ । एकता हुन्छ भनेर लागेका छौं । एकता नहुनु भनेको सबै सिद्धिनु हो, खरानी हुनु हो । केपी ओली पनि र अरु पनि खरानी हुने हो । खरानी हुने बाटोमा साथीभाई लाग्छन् भन्ने विश्वास छैन । हिजो गल्ती गरेर यहाँसम्म पुर्‍याइहाले । आफूलाई सच्च्याएर एकताको बाटोमा लाग्छन् भन्ने विश्वास छ ।
तपाईंहरुले सहमति निकालेका बिषयमा माधव नेपाल सहमत हुनु भएन भने के गर्नुहुन्छ ?
संवादका सबै बिषय उहाँलाई ब्रिफिङ भइरहेको छ । उहाँ यसबाट अनविज्ञ हुनुहुन्न । मिलाउन अरु साथीहरु पनि लाग्नु भएको छ । ट्रयाक १, ट्रयाक २ र अनेकौं ट्रयाकबाट कुरा भइरहेको छ । जे–जे मुद्धा हामीले अगाडि सारेका छौं, ती माधव नेपालसहित सबै बसेर तयार गरेका हौं । त्यसकारण त्यसमा हामी सहमत हुने, उहाँ असहमत हुने भन्ने प्रश्न उठ्दैन । आज तयार भएका मुद्धा भोली आफैंले मान्नु भएन भने उहाँलाई हामी मनाउँछौं । अन्यथा हामी अहिले सोच्दैनौं । माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी ओली, अमृत बोहरा, वामदेव गौतमसहित हामी सबै एउटै पार्टीमा हुन्छौं । हामी तर्कविहीन रुपमा कसैसँग घुँडा टेकेर कतै जाने पक्षमा छैनौं । तर, तर्कसंगत कुरा नेताहरुले पनि मान्नु पर्छ ।
यसमा सहमति भयो भने पूर्वमाओवादीबाट जानुभएका नेताहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
पूर्वमाओवादीलाई अलपत्र पार्नुपर्छ हामी भन्दैनौं । अरु पनि कतिपय हिजो एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा बसेर काम गरिसकेका साथी पनि कामविहिन अलपत्र हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई कतै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । छलफल गरेर व्यवस्थापन गर्न सक्छौं ।
र, अन्तिममा एक दुई दिन अघिकै कुरा, झलनाथ खनालको नाममा निस्केको विज्ञप्तिको विषयलाई लिएर तपाईंमाथि केही नेताले किन आशंका गर्नुभयो ?
गुटगुटमा पनि विभिन्न खालका धारा हुन्छन् । एमालेमा तीन गुट छन् । केपी ओली गुट, हाम्रो गुट र वामदेव गौतमको गुट छ । यी तीनवटै गुटमा अलगअलग धार छन्, वामदेवकोमा त्यतिधेरै छैन होला । ओलीकोमा एकथरी पार्टी फुटाउन पाए हुन्थ्यो, त्यसपछि आफूले ढलीमली गर्न पाइन्थ्यो भन्ने केही मान्छे छन् । केही मान्छे मिलाएर जानुपर्छ भन्ने पनि छन् । हाम्रो गुटभित्र पनि फुटिहाल्न पाए हुन्थ्यो, अलग्गै चुलोचौको गरिहाल्न पाए हुन्थ्यो, अलग घर खडा गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने पनि छन । हैन, मिलाएर जानुपर्छ भन्ने पनि छन् । कसैलाई फुट्नु नै क्रान्तिकारी काम भन्ने लाग्छ । कसैलाई मिलाएर लाने क्रान्तिकारी लाग्छ । फुट्नु क्रान्तिकारी हैन, पलाएन भएर जाने हो । फुटवादी नीति पलायनवादी नीति हो, भगौडा नीति हो । त्यो हामी गर्दैनौं । त्यसकारण झलनाथ खनालले के गर्नुभयो र आशंक गर्नुपर्ने ? उहाँले एकताको कुरा गर्नुभएको छ, राम्रो कुरा छ । मिल्नु सफलताको सूचक हो । फुट्नु, विभाजित हुनु असफलताको बाटो हो । कोहीले आशंका गर्छ भने पार्टी इच्छामा अवरोध भएको ठानेको हुन सक्छ । त्यस्तो आशंकाको केही अर्थ छैन ।
प्रकाशित : असार ४, २०७८ १९:४९